Shina: Noteren’ireo Mpiasam-panjakana Mpanao Kolikoly Hanala Zaza Nefa Efa Tara Loatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2012 2:01 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Deutsch, عربي, Italiano, Español, 日本語, Filipino, English
Nieli-patrana manerana ny fampahalalam-baovao sosialy sy ny sehatra fitorahana bilaogy kiritika ka niteraka fenehoan-kevitra an-katezerana ny sarinà vehivavy iray tao amin’ny faritanin’i Ankang Shaanxi, ao Shina noterena hanala zaza tamin’ny fotoana efa tara. Mampiseho vehivavy matory eo ambonin’ny fandriana miaraka amin’ny fatin-janany 7 volana ny sary [Fampitandremana: mampihoron-koditra ny sary]. Nisafidy ny tsy hanivana izany vaovao izany ny governemanta. Ho solon’izany, ny tenifototra “bevohoka 7 volana noterena nesorina” no malaza hita amin’ny vaovao 10 voalohany amin’ny tranokala fampahalalam-baovao sosialin’ny Sina Weibo.
Tamin’ny taona 1980, nampiditra ny politikan'ny zaza tokana i Shina izay mametra ireo mpivady marobe tsy hiteraka mihoatra ny 1, nisy kosa ny fepetra manokana maromaro ho an’ny mpivady tambanivohitra, sy ho an’ny olona tsy manana mpiray tampo, ary ny hafa. Nampiharina izany politika izany eny anivon’ny faritany amin’ny alalan’ny fandoavana onitra. Araka ny voalazan’ny lahatsoratra tao amin’ny Radio Free Asia tamin’ny 12 Jiona 2012, niampanga ireo manampahefana misahana ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ao an-toerana ilay renim-pianakaviana, Feng Jiame, noho ny fanerena azy hanala zaza satria tsy nandoa ara-potoana ny onitra RMB 40,000 (eo amin’ny $6,000 USD).
Na dia mandalo fanadihadiana aza ankehitriny ireo manampahefana ao Shaanxi ary na dia efa nanipika koa aza ny fampahalalam-baovaom-panjakana fa tsy ara-dalàna ny fanalan-jaza taraiky loatra ao Shina ka tokony tsy holeferina mihitsy, nivonton-katezerana hatrany ny mpiserasera, ary nilaza fa efa fanao mahazatra izany paikady tsy mitsinjo ny maha-olona izany na dia eo aza ny lalàna.